Ku kari maraqa leh broccoli, saxan kalluun oo fudud. | Cuntooyinka Jikada
Ku kari maraqa leh broccoli
Montse Morote | 27/08/2021 09:00 | Cunnooyinka Kalluunka, Cunnooyinka khudradda
Ku kari maraqa leh broccoli, Cunto fudud oo caafimaad qabta. Isku -darka kalluunka iyo khudaarta ma aha mid aad u fudud, laakiin waxaa lagu qasi karaa maraqa si loo siiyo dhadhan kale oo sidaas ayaa lagu soo bandhigaa khudaarta ku jirta suxuunta kalluunka ama hilibka.
Markan waa saxan fudud, suugo aad u fudud oo khudaarta la soo bandhigo hab fudud oo marka dhadhanka la isku darayo aad bay u wanaagsan tahay.
Waan hubaa inaad jeclaan doonto, haddii aadan jeclayn broccoli waxaad ku ridi kartaa khudaar kale.
8 xaleef khudaar ah
150 ml. khamri cad
1 galaas yar oo biyo ah ama maraq kalluun
4-5 qaado oo kareem dareere ah
100 gr. Of bur
Si loogu diyaariyo hake maraqa leh broccoli, waxaan ku bilaabi doonaa diirka toonta, jarjar aad u yar.
Waxaan ku ridnay digsi diyaarad saliid leh kuleyl dhexdhexaad ah.
Dhinaca kale waxaan ku ridnaa bur saxan.
Waxaan cusbaynnaa qaybaha hake ee aan yeelan doonno oo nadiif ah oo aan u jarjareyno xaleefyo ama qaybo aan laf lahayn, tan ma sameeyo kalluumeysatada.
Waxaan cusbaynnaa qaybaha hake, waxaan ku dhex marnaa burka oo marka saliiddu kululaato waan shiilnaa, iyaga oo waxoogaa dibedda ah ku dubayna labada dhinac. Waxaan soo saarnaa oo kaydsanaa.
Waxaan ka faa'iideysannaa isla saliidda, haddii loo baahdo waxaan ku darnaa xoogaa yar.
Waxaan xoogaa hoos u dhigi doonnaa kuleylka, waxaan ku darnaa toonta oo u oggolow inay sii daayaan dhadhankooda, ka hor inta aysan midab qaadan waxaan ku darnaa khamriga cad, waan u oggolaannay inuu yareeyo.
Ku dar biyaha ama kalluunka, kul. Waxaan ku darnaa kareemka, waxoogaa cusbo ah.
Waxaan ku ridnaa gabal hake ah, waxaan ku xoqnaa broccoli qaybta cagaaran si ay ugu dhex qasto suugada, xaddiga sida aan jecel nahay oo waxaan ku ridnaa qaybo ka mid ah maraqa.
Wax walba waxaan ku dhaafnaa 10 daqiiqo, waxaan dhadhaminnaa milixda waana intaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Kalluunka » Ku kari maraqa leh broccoli
Bakaylaha oo lagu tolay toon iyo baradho